सलमान खानले लेखे ‘नेपाल हामीलाई ‘स्वाग से स्वागत’ गर्ने होइन,नेपाली कलाकारको को को सलमान स्टेज सेयर गर्दै ? | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
Home >> bollywood >> सलमान खानले लेखे ‘नेपाल हामीलाई ‘स्वाग से स्वागत’ गर्ने होइन,नेपाली कलाकारको को को सलमान स्टेज सेयर गर्दै ?
सलमान खानले लेखे ‘नेपाल हामीलाई ‘स्वाग से स्वागत’ गर्ने होइन,नेपाली कलाकारको को को सलमान स्टेज सेयर गर्दै ?
Posted by: namastefilmy February 8, 2018
सलमान खानसँग स्टेज सेयर गर्ने नेपाली कलाकार अझै टुंगो लागेको छैन । आयोजकका अनुसार नेपाली कलाकार स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले उनीहरुसँग सल्लाह गर्न केही ढिलो भएको हो । आयोजक ओडिसि इन्टरटेनमेन्टले दुई–तीन दिनभित्रै कलाकार टुंगो लाग्ने बताएको छ । ओडिसि इन्टरटेनमेन्टका सिमान्त गुरुङले भने, “कम्तिमा ५ जना राम्रा नेपाली कलाकार लिनेछौं, तर अहिले यसलाई नै लिने भन्ने फिक्स भैसकेको छैन ।”
गुरुङका अनुसार प्रियंका कार्की र कार्टुन क्रुजसँग भने एक चरणको कुरा भइसकेको छ । सबैले ट्रयाकमा गाउने भएकाले सांगीतिक ब्यान्ड भने कार्यक्रममा सहभागी गराइने छैन ।
फागुन २६ गते बलिउड स्टार सलमान खान नेपाल आउने निश्चित भएपछि आयोजकले उनीसँग नृत्य गर्ने तथा गाउने कलाकारको खोजी गरेको हो । महोत्सवको मौसम भएकाले अधिकांश लोकप्रिय कलाकार स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।
‘द–दबङ द टुर’ अन्तर्गत सलमानसँगै नायिका सोनाक्षी सिन्हा, निर्देशक प्रभु देवा, डेजी शाह, कृति सेनोन र पञ्जाबी भांगडा डान्सर ‘मिड बोस’ पनि आउने छन् । कन्सर्टमा सलमान र कट्रिनाले एकसाथ स्टेजमा प्रस्तुति दिनेछन् । सलमानले करिब ३ घण्टा स्टेजमा बिताउने आयोजकले जनाएको छ । आयोजक अहिले प्रोडक्सन र सुरक्षा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको गुरुङले जानकारी दिए ।
५० हजार दर्शक उपस्थित हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ । “ब्रायन एडम्स आउँदा झण्डै २० हजार दर्शकले टिकट किनेका थिए,” गुरुङले भने, “ब्रायन एडम्सका तुलनामा सलमान नेपाल र नेपालीका लागि परिचित भएकाले ५० हजार दर्शक आउने अपेक्षा गरेका छौं । ”
१५ करोड रुपैयाँ टिकटबाट उठाउने योजना रहेको गुरुङको भनाइ छ । सलमानले कति पारिश्रमिक लिन्छन् भन्ने जिज्ञासामा गुरुङ भन्छन्, “हाम्रो कम्पनीले यस्ता कार्यक्रम यस अगाडि पनि गरिसकेकाले हाम्रो आफ्नै नियम छ । सोहीअनुसार पेमेन्ट गर्छौं ।” सलमानले लिने रकम उनले खुलाउन चाहेनन् ।
१५ सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीले कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षा दिनेछन् भने ५ सय प्राइवेट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । ४ सयजना स्वयंसेवकले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नेछन् । टिकटदर ३ हजार, ५ हजार, १० हजार र २० हजार रहेको गुरुङले जानकारी दिए । सलमान फागुन २५ गते नेपाल आउनेछन् । उनी विमानस्थलबाट सिधै होटल सोल्टी जाने छन् । सलमानसँगै ७ जना कलाकारका साथमा ९० जनाको टोली होटल सोल्टीमा रहनेछ ।
चलचित्र फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ को सफलता साट्ने क्रममा सलमान नेपाल पनि आउन लागेका हुन् । सलमान सन् १९९४ पछि दोस्रोपल्ट नेपाल आउन लागेका हुन् ।
यस्तै बलिउडका ‘सुल्तान’ सलमान खानले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट ‘नेपाल हामीलाई ‘स्वाग से स्वागत’ गर्ने होइन ?’ भन्दै स्टाटस लेखेका छन् । उनको उक्त स्टाटसमा अधिकांश नेपाली फ्यानले कमेन्ट गरेका छन् । अझ धेरै त युवतीहरुले ।
उनको स्टाटसमा नेपाली फ्यानले ‘लभ यू सल्लु’, ‘यू आर अलवेज कम ईन नेपाल सल्लु भाई’, ‘वेलकम काठमाडौं, नेपाल’, ‘आपको स्वाग से स्वागत’, ‘वाउ वेलकम’, ‘वेलकम टू माई नेपाल माई हार्ट वी लभ यू’ जस्ता कमेन्ट लेखेका छन् ।
Previous: चलचित्र ‘हुर्रे’ को कमेडी ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
Next: द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोेको अनुसन्धान
केकी र नाजिरको ‘राज्जा रानी’पुस २८ मा आउने
सलिनमान र सलोनको नया चलचित्र ‘यात्रा’को घोषणा ,मलिका महतले नायिकामा डेब्यु गर्दै